Dekadda iyo Horseed oo isku Garab dhacay & hoggaanka horyaalka oo weli lagu loollamayo
Sunday, March 24th, 2019 - 09:36:35
Monday February 26, 2018 - 20:39:08 in Wararka by Hussein Hadafow
Kooxaha Dekadda iyo Horseed ee horyaalka kubadda cagta ayaa Galabta kulan adag ku qaatay Garoonka Koonis ee degmada Cabdicasiis, halkaas oo labada naadi ay Garab dhac ku galeen.
Horseed oo horyaalka Faraqa goolasha uga hoggaamineysay Dekadda ayaa waxay dooneysay in ay taas ku beddesho faraqa dhibcaha, waxayna taasi dhici kartay oo kaliya haddii ay adkaato maanta.
Dekadda oo dhankeeda difaacaneysa horyaalka kubadda cagta oo ay Sanadkii hore qaadday ayaa dooneysay in ay markan hoggaanka kali ku noqoto, mana dhicin oo Garab dhicii maanta labada kooxood wuxuu qasbayaa in uu loollanka hoggaanku halkiisa kasii socdo.
Labada kooxood waxay hadda leeyihiin min 14 dhibcood, iyadoo Horseed ay dhanka goolasha uga horreysay dhanka kala sarreynta naadiga Dekadda, waxaana Macallin Yuu Cali oo Dekadda hoggaamiya uu sheegay in ay diyaar u yihiin sanadkan in ay difaacdaan horyaalka.
Ha yeeshee Horseed oo ku faaneysa in ay heysato Tababare Cumar Caruus ayaa Sanadkan dooneysa in ay ka baxdo Abaarta Koobka horyaalka dalka, iyadoo kulamada oo dhan aan Sanadkan weli laga adkaan, waxayna ciyaartay ilaa iminka 6 kulan oo horyaalka ah.